cele Archives - Page2of 296 - The Moon MM
သူ့နာမည်သူ့ပုံနဲ့သုံးနေတဲ့Viber အကောင့်တုအကြောင်းသတိပေးလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
November 10, 2020 by Wai Lu
ပြည်သုချစ်အနုပညာရှင်တစ်ျယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့အနုပညာလောကမှာထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအောင်မြင်နေတာနဲ့အမျှမနာလိုသူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုလည်းခံနေရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းကိုဗစ်ကာလမို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အပြင် သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်မှန်သမျှကို လိုက်hackနေတဲ့သူကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းပိုင်ဖြိုးသုကသူ့နာမည်သူ့ပုံနဲ့သုံးနေတဲ့Viber အကောင့်တုအကြောင်းသတိပေးလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားခဲ့ပါတယ်။”တောင်းပန်ပါတယ်ဟယ် COVID ကာလအတွင်းစိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှfacebook account နဲ့e-mail ကိုလိုက် hackနေတာကတစ်မျိုး!!!!အခုလည်းလာပြန်ပြီ Viber accountကြီးကိုကိုယ့်နာမည်ကိုယ့်ပုံကြီးနဲ့ဖွင့်ပြီးဘာတွေလိုက်လုပ်နေပြန်တာတုံး???? တော်သေးတာပေါ့သဲလေး( Thazin Htoo Myint)လာပြောပြလို့(ကျေးဇူးပါသဲလေး) ရှိကြီးခိုးပါရဲ့ဟယ်ဘာတွေဖြစ်စေချင်နေတာလဲမနှောင့်စမ်းပါနဲ့”ဆိုပြီးရေးသားကာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်Viber accountနဲ့ပါနှောက်ယှက်နေတာကြောင့် အဆိုပါအကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါကြောင်း သုသုကယခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။”ဒီ Viber accountက သုသုနာမည်နဲ့စကားတွေလိုက်ပြောနေပါတယ် (အနုပညာလောကကသူတွေကိုပါလိုက်ပြောနေတာပါ ဓါတ်ပုံပါ‌တောင်းပါသေးတယ် )ဖုန်းနံပါတ်လည်းမဖော်ထားတော့ဘယ်နံပါတ်နဲ့သုံးနေလဲဆိုတာလည်းကြည့်လို့မရလို့ပါဒီ Viber accountကသုသုနဲ့ဘယ်လိုမှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးရှင် ဒါကြောင့်မို့ ဒီaccountပိုင်ရှင်‌ရဲ့မည်သည့်လုပ်ရပ်အပြုအမူကိုမျှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင် “ဆိုပြီးပြောပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Paing Phyoe Thu
လူဦးရေ(၁၁၁၁)ယောက်စာအတွက် ထမင်းဘူးနဲ့ပန်းသီးတွေကိုလိုက်ပြီးလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ဒိန်းဒေါင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ပြီးဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ကတော့စိတ်သဘောထားဖြူစင်သလို အလှူအတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း လက်မနှေးဘဲမကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းလူဦးရေ(1111)ဦးစာအတွက် ထမင်းဘူးနဲ့ပန်းသီးတွေကိုချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့နဲ့အတူလှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလှူအကြောင်းကိုတော့ဒိန်ဒေါင်းက (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်းနဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသာဓုခေါ်လို့ရအောင်ယခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ “လူဦးရေ(1111)ဦးစာအတွက်အချိန်ပေါင်း(23)နာရီလူပေါင်း(30)ကျော်လုပ်အားနဲ့အလှူရှင်များစိတ်ချမ်းသာစေရန်ယနေ့လှူဒါန်းမှု့လေးပါ ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်တယ်”ဆိုပြီးရေးသားကာ အလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Dain Daung
ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်ရှိ မသန်စွမ်းသူများနှင့်မျက်မမြင်များအတွက် ဆေးကုသစရိတ်နှင့်အားဆေးများလှူဒါန်းပေးသွားမည့် ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအဆက်အပြတ်လုပ်ကိုင်နေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်းဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမကတော့ မိဘမဲ့ကလေး(၃၀)ကျော်ကို မိခင်အရင်းတစ်ယောက်လိုပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်းရွှေပြည်သာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများနှင့်မျက်မမြင်ညီအစ်ကို မောင်နှမများအတွက် ဆေးကုသစရိတ်နှင့်အားဆေးများလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်းသိရလို့ ခိုင်နှင်းဝေကသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ သူမနဲ့အတူပါဝင်ကုသိုလ်ယူလှူဒါန်းလိုသူများအနေနဲ့လည်း တတ်နိူင်သလောက်ပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိူင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်ဆော်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ ခိုင်နှင်းဝေကပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Khine Hnin Wai
အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်လက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဆရာသမားများကိုရိုသေစွာသီတင်းကျွတ်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ပရိသတ်တွေကခေးလို့ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါကတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင်၊မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ခန္ဓာကိုယ်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကိုလည်း အခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့သူမကကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့ သူမရဲ့အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူမကတော့စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး ယဉ်ယဉ်လေးသာနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုလိုသီတင်ကျွတ်ကာလမှာတော့ ခင်ဝင့်ဝါကအနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်လက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဆရာသမားများကို ရိုသေစွာသီတင်းကျွတ်ကန်တော့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ခင်ဝင့်ဝါက “ဒီနေ့ဝင့်ဝါရဲ့ဆရာသမားများအား သီတင်းကျွတ်ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့ပါတယ်”ဆိုပြီးရေးသားကာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Khin Wint Wah
လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခြေခံလူတန်းစားများကို ရွှေလက်စွပ်၊ဆွဲကြိုးနဲ့ပိုက်ဆံတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
November 9, 2020 by Wai Lu
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့ငယ်ရွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အလှူအတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းရက်ရောပြီး မကြာခဏဆိုသလိုလည်းအလှူအတန်းတွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအတွက် ထောက်ပံ့လှူးဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ဓမ္မဝိဟာရ ပထမကျော်စာသင်တိုက်ရှိသံဃာတော်များအား ခန့်စည်သူဦးဆောင်တဲ့မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့နဲ့အတူ တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအလှူကအပြန်မှာတော့ဖြူဖြူထွေးက စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ရွှေလက်စွပ်၊ဆွဲကြိုးနဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူမရဲ့အလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ဖြူဖြူထွေးက”ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိသော အခိုက်အတန့်”ဆိုပြီးရေးသားကာ အလှူပုံရိပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အတူတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Phyu Phyu Htwe
မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့နဲ့အတူ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ဓမ္မဝိဟာရပထမကျော်စာသင်တိုက်မှာ နဝကမ္မအလှူငွေနှင့်ကထိန်သင်္ဃန်းကပ်အလှူကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင်မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှာလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေကိုတွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့လေးကတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းသံဃာ့ဂုဏ်ကိုရည်မှန်း၍ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ဓမ္မဝိဟာရ ပထမကျော်စာသင်တိုက်ရှိသံဃာတော်များအား အလှူငွေ(၁၅) သိန်း-သင်္ဃန်းအစုံ (၁၀၀)-ဆန် (၁၀) အိတ်-ဆီ(၅၀) ပိဿာ-ပဲ(၅၀) ပိဿာ-ကြက်သွန်နီ(၅၀) ပိဿာ-အာလူး (၂၀) ပိဿာ-ကြက်သွန်ဖြူ (၂၀) ပိဿာ-ကြက် ဥ (၁၀၀၀) လုံး-ဆား (၂) အိတ်-ဆန်ကြာဆံ (၁၅) အိတ်-ငန်ပြာရည် (၁၀) ဗူး-ငါးခြောက်(၁၀) ပိဿာ-ဟင်းခတ်မှုန့် (၁၀) ထုပ်-ဆပ်ပြာတောင့် (၈၀)တောင့်(ရွှေဝါ)-ဆပ်ပြာမှုန့်(၈၀)ထုပ်-ဆပ်ပြာမွှေးခဲ(၈၀) တုံး-စောင် (၅၀)ထည်-သွားတိုက်ဆေး+သွားပွတ်တံ အစုံ (၈၀) -ငါးပိကြော်များ၊ပုန်းရည်ကြီးများ၊လက်သန့်ဆေးရေများ၊အရက်ပြန်ရေစိုတစ်ရှူးထုပ်များ၊မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးဝါးများ၊အချိုရည်များ၊ Nice Food မုန့်များ၊Delta Queen ဒိန်ချဉ်များနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နေ့ဆွမ်းအလှူကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆိုပါအလှူလေးမှာတော့ခန့်စည်သူနဲ့အတူဖြူဖြူထွေး ၊မမဆောင်း၊ဘုန်းလျှံတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တခြားသောအနုပညာရှင်တွေကလည်းပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ Source:Kyaw Soe Win
ချစ်သမီးလေးရဲ့(၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ မေမေမျိုးစန္ဒီကျော်
သရုပ်ဆောင်မျိုးစန္ဒီကျော်ကတော့ အနုပညာလောကမှာတစ်ခေတ်တစ်ခါတည်းက ယနေ့အချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သမီးလေးအတွက်လည်းအချိန်ရရင်ရသလို ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကိုဖန်တီးပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ကတော့ မျိုးစန္ဒီကျော်ရဲ့သမီးလေးအိမ်စည်မြင့်မိုရ်ကျော်ခေါ် Jewel လေးရဲ့အသက်(၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေမေမျိုးစန္ဒီကျော်ကတော့ သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့တဲ့သလို သမီးလေးလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သမီးလေးအတွက်လည်းယခုလိုပဲ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ “9.11.2020အိမ်စည်မြင့်မိုရ်ကျော် @ Jewel Happy Birthday ပါမေ့သမီးလေးရေ သမီးလေးရဲ့(၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှစပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ယှဉ်၍အရာရာကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်သော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထက်မြတ်လိမ္မာသောကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်ပြီး လူအများကချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေနော်”ဆိုပြီးရေးသားကာ သမီးလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Myo Sandy Kyaw
အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်အိမ်မှာခေါ်ထားပြီး ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်သင်ဆရာ စိုးသူအားဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ
ညီနန္ဒကတော့ပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်း “‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘လုပ်ငန်းကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းကနေသူကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်လောက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေသလို အလှူရှင်တွေကိုယ်စားလည်း လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ညီနန္ဒက သူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်ချို့ကိုအိမ်မှာခေါ်ထားပြီး ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်သင်ဆရာအကယ်ဒမီကိုစိုးသူအား ရိုသေလေးစားစွာနဲ့သီတင်းကျွတ်ဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ညီနန္ဒဟာ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ယခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။”ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ ခက်ခဲခဲ့တဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်ချို့ကိုအိမ်မှာခေါ်ထားပြီး ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ကျေးဇူးရှင်သင်ဆရာ အကယ်ဒမီကိုစိုးသူ “‘ SoeThu Lwin “‘ ကို ဒီနေ့ (၉.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှာ “‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘ နဲ့ သီတင်းကျွတ်ဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်”ဆိုပြီးရေးသားကာဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Nyi Nanda
ဦးထွန်းလို့အမြဲခေါ်ပြီးတွေ့တိုင်းချွဲတတ်တဲ့ ငချွဲလေးမင်းရွှေရောင်တင်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေထွန်းထွန်းကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အပြင်၊အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောမှာတော့သူက ဒါရိုက်တာခင်လှိုင်ရိုက်ကူးတဲ့“ဆိုးပေ”ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ထွန်းထွန်းက ဦးထွန်းလို့အမြဲခေါ်ပြီးတွေ့တိုင်းချွဲတတ်တဲ့ ရွှေမန်းသဘင်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေး မင်းရွှေရောင်တင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။ “Happy Birthday ပါ ငချွဲကောင်လေးပူတူးလေးရေ …မိဘကိုအခုထက်ပိုသိတတ်ပြီး ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်မြှောက်ပါစေ. အစစရာရာကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ. ဦးထွန်းကိုလည်း တွေ့တိုင်းချွဲအုံးနော်”ဆိုပြီးရေးသားကာ “ဆိုးပေ”ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးစဉ်ကပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မင်းရွှေရောင်တင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ပြည်သူ့အချစ်တော်ပိုင်ဖြိုးသုကလည်း မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။ သားသားလေးမင်းရွှေရောင်တင်တစ်ယောက်အနုပညာအလုပ်တွေကို ဒီထက်မကလုပ်နိုင်ပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ၊ ဖေဖေမေမေအားကိုးရတဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ Source:Htin Aung Tun
မိခင်နဲ့အတူသံဃာတော်များအတွက် သင်္ကန်းကပ်အလှူလေးကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နေဆန်း
နေဆန်းကတော့ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့စတင်ပြီး ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနာက်ပိုင်းမှာတော့သူက Music Videoလေးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ရိုးသားကြိုးစားမှုတွေကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို အခိုင်အမာရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နေဆန်းဟာမိဘအပေါ်လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အလှူအတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းရက်ရောသူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်းကိုဗစ်ကာလမှာတောင် စားဝတ်နေရေးကြောင့်ဈေးရောင်းထွက်နေရတဲ့ အဘဆီကဈေးတွေအကုန်ဝယ်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့နေဆန်းက မိခင်နဲ့အတူသင်္ကန်းအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ “မေမေနဲ့ သင်္ကန်းအလှူ”လို့ရေးသားကာ အလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Nay Sann
← Previous Page1 Page2 Page3 … Page296 Next →